article Archives | Kingdom of news
ဦးရာဇတ်ရဲ့ကျောင်းက ကျောင်းသူလေးကို ဆွ*လာ*ရမ်**လာ*သွားလုပ်တဲ့ ဂျပန်စစ်သား ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ . . .
ခေတ်က ဂျပန်ခေတ် အင်္ဂလိပ်ပညာရေးကို ကျ**ပညာရေးဖြစ်လို့ မလိုလားကြတာကြောင့် အမျိုးသားကျောင်းမှာ ကျောင်းတက်ကြပါတယ်။ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက ဦးရာဇတ်။ “တနေ့တော့ ဂျပန်စစ်သားတယောက်က ကျောင်းသူတဦးကို ကျောင်းရှေ့မှာ ဆွ*လာ*ရမ်**လာ* လုပ်တယ်။ ကျောင်းသူလေးက ငိ*ယိ*ပြီး ဂျပန်စစ်သားကို တွန်းပစ်လိုက်တယ်။ နောက် ...
ဆန်ဆေးရေနဲ့ ခေါင်းလျှော်ဖြစ်အောင် လျှော်ကြည့်ပါ ဆန်ဆေးရေနဲ့ ခေါင်းလျှော်ကြမယ် ဆန်ဆေးရေ ဆိုတာဟာ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်စားတဲ့ဆန်ကို ထမင်းအဖြစ်မချက်ခင်မှာ ရေနဲ့ ဆန်ကို ဆေးရာကနေ ရတဲ့ ရေပါ။ကျွန်တော်တို့ အတော်များများကတော့ ဆန်ဆေးရေကို သွန်ပစ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ သို့သော် ရှေးယခင်ကတည်းက ...
တွံတေးမြို့က ဒု**၊ ဓ**ပြီးတဲ့ ရိုးရာလက်ဝှေ့သမား လူမိုက်ကြီး ပိုလို နဲ့ သိုင်းပြောင်းပြန် ဦးမောင်လေးတို့ရဲ့ လက်ဝှေ့ကြိုးဝိုင်းထဲက အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ရပ်
တွံတေးမြို့က ဒု**၊ ဓ**ပြီးတဲ့ ရိုးရာလက်ဝှေ့သမား လူမိုက်ကြီး ပိုလို နဲ့ သိုင်းပြောင်းပြန် ဦးမောင်လေးတို့ရဲ့ လက်ဝှေ့ကြိုးဝိုင်းထဲက အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ရပ် မောင်လေးကား ယခင်က တွံတေးရွှေဆံတော်ဘုရားပွဲတော်တွင် အကြိမ်များစွာ လက်ဝှေ့ထိုးဖူးခဲ့သည်။ သူများတကာတွေက မြှောက်ပေးရာမှ တကယ်တက်၍ ထိုးခဲ့ခြင်းသာ ...
ကိုယ်တွေ့ ဈာန်ပျံ ရဟန်းတော်များ ၁၉၈၆-၈၇ ခုနှစ်များသည် နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်သေးသော နှစ်ဖြစ်သောကြောင့် စစ်တောင်းတံတားကို ဖြတ်သန်းရပြီ ဆိုရင် •• ဓားမြ ကြောက်ရ၊ သူပုန် ကြောက်ရနဲ့ ရင်တစ်ထိတ်ထိတ် ရှိလှပါသည်။ ထိုခေတ်အခါက မွန်ပြည်နယ်မှ ...
ဆွမ်းဘုန်းပေးခါနီး အုန်းမောင်းခေါက်တာ ဘာကြောင့်လဲ ?
ရဟန်းသံဃာတော်များ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးခါနီး အုန်းမောင်း ခေါက်တာ ဘာကြောင့်ပါလဲ ? သာမန်အနေနဲ့ကြည့်ရင် ဆွမ်းစားချိန်ကျရောက်ပြီဖြစ်၍ ကျောင်းတိုက်ရှိ ရဟန်းသံဃာများ ကြွရောက်တော်မူပါရန် အသိပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ယူစရာပါပဲ … ဒါပေမယ့် အုန်းမောင်းခေါက်ခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ ထင်မှတ်ထားတာထက် ပိုလေးနက်ပြီး အနှစ်သာရနဲ့လည်း ...
Britain က spitfire plane တွေပြန်ပေးရင် ပတ္တမြားငမောက်နဲ့နန်းစဉ်ရတနာတွေ ပြန်တောင်းပေးနိုင်မလား
Britain က spitfire plane တွေပြန်ပေးရင် ပတ္တမြားငမောက်နဲ့နန်းစဉ်ရတနာတွေ ပြန်တောင်းပေးနိုင်မလား Britain က မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ အကောင်းတိုင်း အစိတ်အပိုင်းလိုက်ထားခဲ့တဲ့ spitfire plane တွေကို ပြန်လိုချင်ပါသတဲ့ ။ အခုမှသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တော့ အံများတောင်သြပါရဲ့ ။ ...
ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ လက်ရုံးရည်မှာ ဂျပန်စစ်သားအယောက် ၃၀ လောက်နဲ့ ယှဉ်နိုင်တာကြောင့် ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ကြီးထံမှ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ရရှိခဲ့တဲ့ သိုင်းပြောင်းပြန် ဆရာကြီး ဦးမောင်လေး
ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ လက်ရုံးရည်မှာ ဂျပန်စစ်သားအယောက် ၃၀ လောက်နဲ့ ယှဉ်နိုင်တာကြောင့် ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ကြီးထံမှ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ရရှိခဲ့တဲ့ သိုင်းပြောင်းပြန် ဆရာကြီး ဦးမောင်လေး ပြောင်းပြန်ပညာ၊ သို့မဟုတ် သိုင်းပြောင်းပြန်ပညာကို မြန်မာပြည် (ပြည်မ)တွင် စတင်ပို့ချသွားခဲ့သောသူမှာ ယခု အသက်ထင်ရှားရှိသော ဆရာကြီးဦးမောင်လေး၏ ...
2013 လောက်ကစိုက်ကြတဲ့ ယူကလစ်တွေက ပြင်ဦးလွင်ကို အကျည်းတန်ရေ ရှား စေ ပြီ။
2013 လောက်ကစိုက်ကြတဲ့ ယူကလစ်တွေက ပြင်ဦးလွင်ကို အကျည်းတန်ရေ ရှား စေ ပြီ။ ပြင်ဦးလွင်ကို ဒုက္ခပေးလာမည့် ယူကလစ်တောများ ယူကလစ်ပင်ဆိုသည်ကား အမှန်တကယ်တွင် ရေဝပ်ရေလျှံသော နေရာ၊ ရေဘေး အန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်သည့် နေရာတို့ တွင် ...
“ခြောက်ထောင်နဲ့ ရမလား၊ ခြောက်ထောင်နဲ့ ရရင် ယူမယ် ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးရေ ကျေးဇူးပါ
“ခြောက်ထောင်နဲ့ ရမလား၊ ခြောက်ထောင်နဲ့ ရရင် ယူမယ်”ဘုရားရေ၊ ကိုယ့်မှာ မျက်နှာတွေက ပူလှပြီ။ တကယ်ခင်ဗျ၊ တကယ်။ မိန်းကလေးအများစု သိပ်ထူးချွန်တဲ့နေရာတွေထဲမှာ စျေးဆစ်တာကလည်း တစ်ခု အပါအဝင်ပဲခင်ဗျ။ အခုလည်း ကြည့်လေ၊ တစ်သောင်းနှစ်ထောင်တန်တဲ့ ပစ္စည်းကို တစ်ဝက်စျေးနဲ့ ...
ထိုး ကွင်း မင် ကြောင် "ပျိုတို့မောင် အယဉ်ကြိုက် ခါးဆိုက်တဲ့မင်ကြောင် ခါးတောင်းရယ်မြှောင် " ဆိုတဲ့ ကဗျာလေး ငယ်ငယ်က ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်။ စိတ်ဝင်စားလှတယ်ရယ်လို့ မဟုတ်ပေမဲ့ စပ်စုချင်မိတယ်။ ထိုးကွင်းမင်ကြောင်ဟာ ရဲရင့်တဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ သင်္ကေတလို့ ...